Liverpool oo gaartay finalka tartanka Champions league kaddib markii si layaab leh ay ku reebeen Kooxda Barcelona +Sawiro – Gool FM
Liverpool oo gaartay finalka tartanka Champions league kaddib markii si layaab leh ay ku reebeen Kooxda Barcelona +Sawiro
Bashiir May 7, 2019
(Europe) 7 Maajo 2019 kooxda Liverpool ayaa si mucjiso leh ugu gudubtay finalka Champions league kaddib markii ay 4-0 kaga adkaadeen Kooxda, oo kulankii lugtii hore ku soo badisay 3-0.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ahaa mid aad u xiiso badan waxaana lagu kala nastay 1-0 oo ay ku hor kaceyso Kooxda Liverpool.
Reds ayaa ku bilaabatay dar dar xoogan iyaga oona la yimid goolka koowaad ee ciyaarta daqiiqadii 7 aad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga lagu magacaabo Origi kaddi markii uu ka faa’ideystay kubad uu iska soo saaray gool haye Stegen.
Kooxda Barcelona ayaa abuurtay 3 jaanis oo gool loo filan karay qeebtii koowaad ee ciyaarta, balse uma suurta galin in fursadahaan ay ka faa’ideystaan qeebtii hore.
Wiilasha macalin Klopp ayaa u muuqday kuwa ay ka go’antahay in ay iska soo yareen goolasha lagu leeyahay wallow ay la yimaadeen goolka.
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedkii ayaa lagu kala nastay 1-0 oo ay ku hogaamineyso Kooxda Liverpool, waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid ka xiiso badan qeebtii hore.
Markii dib la isagu soo laabtay Kooxda Liverpool ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed mucjiso xambaarsanaa kaddib markii ay la yimaadeen labo gool oo deg deg.
Wijnaldum oo badal ku soo galay ciyaarta qeebtii dambe ayaa soo gaba gabeeyey kalsooni Barcelona ay ka laheed ciyaarta kaddib markii u dhaliyey labo gool wadna qabad ki noqday taageerayaasha Kooxda Barcelona.
Goolasha labada ah ee uu dhaliyey xidiga reer Holand ayaa yimid daqiiqadihii 54-aad iyo 56-aad waxaana mar qura is badalay jawiga garoonka Anfield waxaa bilaabmay sawaxan mahrajaan wata.
Ciyaartoyda Barcelona waxaa la soo gudboonaaday jahwareer iyo layaab kaddib markii laga bareejeeyey 3 dii gool ee ay garoonkooda ku soo dhaliyeen lugtii hore.
Barcelona sameen kuma leheen kulanka qeebtiisa koowaad sidaas oo ay tahayna markale waxaa yimid goolkii afaraad ee Kooxda Liverpool waxaana mar kale shabaqa gaaray Devid Origi kaddib caawin uu ka helay Alexander-Arnold oo caawiyey goolkiisi labaad.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka ayaa ku soo idlaaday 4-0 oo ay ku adkaatay kooxda Liverpool oo ka soo laabtay 3 gool oo laga soo dhaliyey kulankii lugta hore balse wadarta goolasha ee labada kulan waa 4-3
“Messi ayaa iga dhigay ciyaaryahan wanaagsan” - Jordi Alba
HORDHAC : Ajax VS Tottenham? 90-daqiiqo oo geeri ah iyo midkood labadan koox oo iska xaadirin doona caasimada Madrid